8-ta ugu wanaagsan ee 14-ilaa 16-injijleed oo Laptops ah si aad u iibsato sannadka 2018
Gadashada Guides Kombiyuutarada iyo Maqalka
Eeg xulashada nooca laptops ee ugu fiican miisaaniyad kasta
Dad badan ayaa raadinaya laptops khafiif ah oo fudud. Tani waxay sababtay isbeddel noocyada nidaamyada la heli karo oo ah 14 ilaa 16-inch. Qaar badan ayaa hadda diiradda saaraya waxyaabo ay ka mid yihiin cayaaraha, bandhigyada qadarka sare ama inay noqdaan kuwo aad u yar oo dhaadheer sida ultrababarada . Halkan waxaa ah xulashadeena laptops ee ugu wanaagsan 14 ilaa 16-inch oo ku saleysan cilmi baarista iyo waayo-aragnimo kala duwan ee isticmaalka iyo miisaaniyadda.
La soo bandhigay dhamaadka dabayaaqada sannadka 2016, Lenovo's ThinkPad X1 Ultrabook waa tusaale aad u qurux badan oo ah wax kasta oo aad ubaahan kartid lapto 14-inch. Waxaa ku shaqeynaya 2.6GHz Core I7 processor, 8GB oo RAM ah iyo 256GB SSD, waxaa jira awood badan oo hoos yimaada hawlaha ganacsiga inta lagu jiro maalinta iyo shaqsiyaadka habeenkii. Muuqaalka 14-inch 1920 x 1800 FHD IPS wuxuu bixiyaa midab qurux badan iyo xagal muuqaal leh oo muuqaalka labada sawir iyo filim. Dhamaan 2.6 rodol, iskudarka waxqabadka cajiibka ah iyo muujinta weyn oo dhan waxay sameeyaan shey si fudud loo qaadi karo.
Qalabka khafiifinta ee caaga ah ee bacaha leh iyo jidhka magnesium wuxuu dareemayaa mid adag oo adag oo gacanta ku haya, wuxuuna bixiyaa nabadgelyo badan oo maskaxda ku haysa X1 wuxuu u istaagi doonaa qaar ka mid ah xirashada iyo jeexashada. Wixii adeegsade ah ee ganacsadaha, qaab dhismeedka dabiiciga ah wuxuu ku xiran yahay xulashada amniga ee ah sida akhristaha fingerprint-ka kaliya ee ugu fiican ee loo adeegsado Microsoft ee hana-ku-geynta hudheelka Windows. Dhinaca bidix ee akhristaha fingerprint waa kumbuyuutarka wax-u-qabashada ah oo labadooduba si fantastik ah u leh kumbuyuutarka-fasalka caalamiga ah ee xaraaradda saamiga ee Lenovo. Ku dar sagaal saacadood oo ah nolosha batroolka iyo X1 waa xirmo guud oo loogu talagalay iibsadaha laptop raadinaya waayo-aragnimada ugu fiican suuqa maanta.
Sii waditaanka kumbuyuutarka boorka ah ee Apple, 2017 15 "MacBook Pro waa isku dheelitirnaanta ugu wanaagsan ee awoodda, awoodda iyo waxqabadka. Iyada oo ay jirto qalab casri ah, oo ay ka mid yihiin RAM oo sii kordhaya iyo meel adag oo adag, 2.8-processor Intel I7 processor dual-core waxaa horay loogu daray 16GB RAM iyo 256GB of SSD xasuusta heerarka sare ee waxqabadka iyo qiimaha. Shaxda 2560 x 1600 pixel Retina ma aha qaabka ugu sarreeya ee suuqa, lakiin waxa ay sii wadi doontaa tartanka marka ay la socoto qalabka Apple. The Touch Bar ayaa sii wadi doonta xal gaar ah oo loogu talagalay dadaalka Apple ee ah in aan la soo bandhigin muuqaal buuxa oo la socota barnaamijyada appka lagu daray taageerada usbuuciiba, waa mid aad u awood badan maanta madaama markii ugu horreysay lagu dhawaaqay. Waxay leedahay 10 saacadood oo nolol batrool ah oo leh shaashadda webka iyo 10 saacadood oo ah fiidiyowga iTunes. 061-dhibcood oo dhererkiisu yahay MacBook Pro oo miisaankiisu yahay 4.02 rodol oo la qaadi karo. Ku dar nidaamka qalliinka ee Apple oo leh OS X Sierra oo waxaad heshay baakad fara badan oo xakameynaya sanduuqyada oo idil.
Acer Aspire E waxay leedahay 2.4GHz 7-nucleuc oo kore I3 processor, 4GB RAM iyo 1TB adag oo dhammaantood ka dhigaya waxqabad ka soo baxa qiimaha saxan ee boorsada. Ku darso touchpad sax ah, 802.11ac isku xirnaanta oo ay ku jiraan teknooloojiyada MU-MIMO iyo 12 saacadood oo batteriga ah iyo Acer dareemayaa sida aad u computer sida qiimihiisu ka hooseeyo qiimaha runta ah.
15.6-inch Full HD ComfyView -Taliyaha LED-backlit LCD wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo muuqaal ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay filimyada, kormeerida iyo waxyaabo kale oo badan. Intaa waxaa dheer, Acer waxa uu ku dhisay laba tiknoolajiyada murtiyeedka, oo ay ku jiraan BluelightShield, taas oo yaraynaysa isha muruqa waxayna joojisaa daalka marka loo isticmaalayo PC muddo dheer. Nidaamka DVD-dhiska ee la dhisay ayaa la mid ah nidaamka hadalka Agaasimaha Trueerarmon ee Acer, kaas oo Acer si farxad leh ugu sharaxay "filimada nolosha."
Qaado sawir qaar ka mid ah laptopska kale ee ugu fiican $ 500 oo aad iibsan karto.
La soo bandhigay dabayaaqadii 2016-ka iyo bandhigida naqshadaynta 360-degree, qaabka Samsung ee 7 Spin waa doorasho aad u fiican iyo lacagta ugu fiicnayd ee lagu iibsaday 2-in-1 suuqa maanta. 15.6-inch Full HD 1920 x 1080 bandhig muuqaal ah wuxuu bixiyaa xagal muuqaal weyn oo wax ka qabta taabashada haddii aad ku jirto qaabka laptop ama kumbuyuutarka. Samsung ayaa xitaa kujiray nooc cusub oo "HDR" oo lagu magacaabo "HDR" kaas oo taageera nuxur gaar ah oo leh sawir wanaagsan iyo cad.
Ku darsashada mid ka mid ah 2.5GHz Core I7 processor, 12GB RAM, 1TB oo ah meel adag iyo NVIDIA GeForce 940MX gareyntu waxay ka dhigan tahay waxqabadka maalinlaha ah ee shaqada iyo ciyaarta labadaba. Intaa waxaa dheer, in lagu daro kaarka sawir-qoraalka ee GeForce wuxuu u ogolaanayaa in qaar ka mid ah cayaaraha caadiga ah ee si fiican loogu shaqeeyo goobaha dhexdhexaadinta iyo xalinta buuxda ee HD. Ugu dambeyntii, Samsung Notebook 7 Spin wuxuu leeyahay siddeed saacadood oo nolol batrool ah, miisaankana waa 5 rodol.
Qaado sawir qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee 2-in-1 ee laptops aad iibsan karto.
Haddii ay tahay nolosha batteriga aad rabto, fiiri Acer Swift 5 laptop-ka 14-inch, kaas oo haysta batrool 13-saacadood ah. Waxaa ku shaqeeya jiilka 7aad ee 2.7GHz Core I7 processor, 8GB oo RAM ah iyo 256GB oo ah meel lagu kaydiyo. 14-inch Full HD IPS Widescreen 1920 x 1080 bandhig bandhigyo heer sare ah oo ay weheliyaan tiknoolajiyada dhabta ah ee Acer's TrueHarmony kaas oo ku daraya sheekada qalabka dhegeysiga si kor loogu qaado dhawaaqa. Intaa waxaa dheer, in lagu daro 802.11ac oo isku xirnaanta teknooloojiyada MU-MIMO waxay bixisaa waayo-aragnimo shabakadeed oo mustaqbalka ah oo aan la xaqiijin saddex goorba waxqabadka wireless ee tiknooloojiyada hore.
Dhamaan aluminiumku waxay qabaan taabashada oo kaliya oo kaliya 57 inch oo dhuuban, taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah buugta buugaagta ugu khafiifsan fasalka. Nasiib wanaag, Swift 5 ayaa miisaankeedu yahay 2.87 rodol oo ka dhigaya, 13 saacadood oo nolol batrool ah oo qiimaheeda qiimo leh. Akhristaha sawir qaadaha ayaa ku daraya lakab kale oo amniga ah oo la shaqeeya Windows Hello, si aad u xaqiijiso oo aad u galiso xisaabtaada Windows 10 gudahood dhowr ilbidhiqsi.
Marka la eego 2.8 rodol, Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2-in-1 waa xulasho aad u fiican oo loogu talagalay safarrada ganacsiga kuwaas oo bixiya laptop iyo kumbuyuutar labadaba baakad 14-inch oo kaliya .67 inch dhuuban. Kombiyuutarka dhabta ah ee laydhka ku shaqeeya ayaa ah mid u adkaysta isla markaana si gooni ah dib ugu soo celiya qalabka marka aan la isticmaalin laptop-ka, sidaas awgeedna weli ma muuqato miis ama muraayad kasta. Intaa waxaa dheer, X1 Yoga waxaa lagu tijaabiyay waxyaabo milateri ah, taas oo ka dhigaysa laptop-ka lakabadda ganacsiga ee ugu da'da badan dunida, kuwa ugu khatarsan uguna yar.
Isticmaalaya 2.6GHz Core I7 processor, 8GB oo RAM ah iyo 256GB booska kaydinta, X1 Yoga waxay bixisaa afar habab oo kala duwan oo loo isticmaalo shaqada, soo bandhigida, abuurista iyo isku xirka. The 14-inch 2K (2560 x 1440) shaashadaha taabashada farsamooyinka leh OLED tiknoolijiyada loogu talagalay midabada saxda ah iyo farqiga u dhexeeya. Qalabka stylus stylus wuxuu dib u soo celin karaa 15 ilbiriqsi kadibna wuxuu bixiyaa 100 daqiiqo oo ah isticmaalka sawirrada iyo qoraallada ama dukumintiyada. Nadaafad, awood leh iyo in ka badan siddeed saacadood oo ah nolosha batroolka, X1 Yoga waa mashiinka riwaayadaha ganacsiga ku-oolka ah.
Qaado sawir qaar ka mid ah laptops ganacsiga ugu fiican ee aad ka iibsan karto.
Shaac ka bixiya 2015, Acer Chromebook 15 ayaa weli ah doorasho aad u fiican ee iibsadaha kombiyuutarka ee aan dooneynin culeyska midkood Windows ama Mac laakiin wuxuu weli doonayaa khibrada laptop-la midka ah. Shirkadda Chromebook ee ugu horeysa ee bixisa 1920 x 1080 15.6 inch Full HD display oo leh xagal muuqaal leh oo ballaaran, Chromebook 15 ayaa weli ah xulasho wanaagsan oo loogu talagalay dukaamada laptop raadinaya wax aasaasiga ah iyagoo weli helaya waayo-aragnimada websaydhka ah ee aanad si sahal ah kuugu duubi karin kiniin .
Isticmaalka Intel Celeron 1.5GHz processor, 4GB RAM iyo 32GB SSD, Chromebook 15 wuxuu si fiican u qabataa xitaa dhowr tabs oo furan. Plus, waxaad xitaa ku rakibi kartaa oo kumbuyuutar ku dhigi kartaa Chromebook.
Ugu dambeyn, waayo-aragnimada Chromebook oo dhan waxay ku xiran tahay shabakada Chrome iyo waxaa halkan ku yaal in Chromebook 15 shines. Ku dhowaad shan rodol, waayo-aragnimada guud waxay u egtahay sida Windows-ga iyo Macaladaha Mac, oo leh farriin ballaaran oo waxtar leh oo u hoggaansamaya dhammaan amarrada badan ee Chrome. Dhibaatooyinka yar yar ayaa laga yaabaa inay noqdaan toddoba saacadood oo ah nolosha batroolka iyo xaqiiqda ah in ay jirto xeelad waxbarasho oo ay ku noolaanayso iyada oo aan jirin qalab xiran oo dhan Windows 10 iyo MacOS Sierra.
Qaado sawir qaar ka mid ah Chromebooks kale ee aad iibsan karto.
Noocyada yaryar ayaa si wanaagsan ula xiriiraan ciyaaraha PC-ga maalmahan ka badan Razer iyo laptop-ka 14-inch Razer Blade HD. Qalabka cayaaraha ee GeForce GTX 1060, oo ah qalabka waxaa ku xiran processor processor, 16GB oo RAM iyo 512GB SSD, taas oo ka dhigaysa wax badan oo awood u leh in la qabsado software maanta (oo ay ku jiraan ciyaaraha VR-diyaarinta). Qalabka .7-inch khafiifa aluminium ayaa miisaankiisu yahay 4.16 rodol, sidaa daraadeed way ka fududahay oo ka fududayd tartanka ugu dhow ee goobta ciyaarta.
Marka ay timaado ciyaaraha, shaashaddaada waxay ku xirantahay wax ka badan mashiinka mashiinka, Razer Blade kuma qanacsanayn muraayada Full HD Matte oo bixisa 350 dhalinyaro oo dhalaalaya, LED backlight iyo Full HD (1920 x 1080p) si wax looga qabto baahida loo qabo miisaaniyada xitaa xitaa goobaha ugu sharaxan. Sida muuqata bandhigga, kombuyuutarka Chroma wuxuu bixiyaa 16.8 milyan oo midab oo leh taabasho gaar ah mar kasta iyo waxqabadka kahortaga, kaas oo ka caawiya diiwaan gelinta istiraatiijiyada istiraatiijiga ah ee la socota saxan aan dhawnayn.
Qaado sawir qaar ka mid ah laptops ciyaaraha kale ee ugu fiican ee aad iibsan karto.
7da ugu wanaagsan ee HP Laptops ah si aad u iibsato sannadka 2018
Suuqyada ugu wanaagsan ee Amazon Maalgashiga Maalinta ee 2017
Haddii aad iibsato iPad Mini 4?
Qaababka iPad-ka ee aasaasiga ah: Maxaad iPad-ka ku heli kartaa?
Ka hor intaadan iibsan 2011 iMac
Liiska Fasallada iPad-ga iyo Noocyada
Miyaad u Heshaa iPad Air 2?
Miyaad iibsataa Tablet ama Laptop?
Waa maxay Farqiga u dhexeeya iPad Pro iyo Air?
Faahfaahinta Etsy, oo ah Suuq Ganacsi Sayniska ah Online
Maaha Islaamka: Webka aan la arki karin iyo Webka mugdiga ah
8-tii ugu fiicnayd ee 802.11n Routers si loogu iibsado 2018
Waa maxay iwm / iwm / adeegyo ee Linux / Unix?
Photoshop Fill Miisaaniyada
Sida Loo Isticmaalayo iPadkaaga Telefoonka
IPad iCloud: Sida loo Dhimo iyo Dib u Celinta
Jawaabay: iPad-kayga ma daabicin ama ma heli karo Printer My
Sawirada Epson Sawirrada Sawir-yar-yar-Bir-XP-860
Nuqulada Xogta ee Xogta, Jaantusyada, iyo Naqshadaha ee Excel, Word, PowerPoint
Sidee loo xoojiyaa Xarunta Xakamaynta ee ku yaala iOS 11
Dhibaatooyinka A-Dhex----Dhici Dhibaatooyinka Dembiyada Cadaadiska ah?
Sida loo Isticmaalayo Macluumaadka Muuqaalka ah ee Jajabinta
WOFF Web Wanaagsan Furan
Sida Loo Helo Furaha Furaha Isticmaalka LiveCD Ophcrack
Xeerarka Farqiga-Man khiyaanada - PC
Sida loo xiro iPad si Wi-Fi ah 5 tallaabo oo sahlan
Waa Maxay Tiknoolajiyada Telefoonada ee EDGE?
7 Sawirada Ugu Fiican ee Dijital ah ee ka hooseeya $ 200
Sanduuqa Dharka si aad ugu soo jiidato baabuurkaaga